Success Open University
By sopenu | July 1, 2018
हामी सबै आफ्नो जीवनमा सफलता चाहान्छौ । सबैलाई जित्न चाहान्छौ । आफ्ना ईच्छा र चाहानाहरु पूरा गर्न चाहान्छौ । हाम्रा हर प्रयास र गतिविधिहरु कुनै न कुनै क्षेत्रमा, कुनै न कुनै ठाउँमा र कुनै न कुनै कुरामा सफलता प्राप्त गर्ने नै हुन्छन ।
हामी मध्ये कोहि पैसा कमाउन सफल हुन चाहान्छौ होलि; कोहि व्पापार, कोहि राजनीति, कोहि जागिर त कोहि समाजसेवामा सफलता प्राप्त गर्न चाहान्छौ । जे होस हाम्रो ईच्छा, चाहाना र उद्देश्य फरक-फरक होला तर हामी सबैको प्रयास भनेको कसरी सफलता प्राप्त गर्ने भन्ने नै हुन्छ ।
मान्छे अनैतिक र नकारात्मक कुराको पछि लागेर जीवनको एउता खुट्किलोमा
त सफल होला , उसको एउटा चाहाना त पूरा होला तर अन्तत ऊ असफल नै हुन्छ । ‘नहुदा एउटा पिर भए पछि दश वटा पिर’ भनेझै मान्छलाई अनैतिक र नकारात्मक बाटोबाट पाएको सफलताले झन ठुलो असफलता भोगाउँछ ।
मान्छको प्रवृत्ति र अहिलेको उपभोगबादी संस्कारले गर्दा अहिलेका धेरै मानिसहरु रातारात धनि बन्ने चाहानेले गर्दा कोहि कालोबजारी गर्न सफल हुने, कोहि चोरि डकैति गर्न त कोहि आजको भोलि लोकप्रिय हुने र कोहि रातारात सर्वसक्तिमान बन्न सफल हुने चाहाना पनि राख्छन । यस्ता नकारात्मक र अनैतिक तवरबाट सफल बन्न चाहाने मान्छे पनि धेरै हुन्छन । तर के वास्तबमा ऊनीहरु साच्चै सफल हुन्छन त ? तपाईलाई लाग्ला – कोहि मानिसले रातारात धनि हुने चाहाना राखेको थियो र ऊ विभिन्न हत्कण्ठा अपनाएर, कालोबजारी गरेर, ढाटरे छलेर, धनि भयो । अनि तपाई भन्नुहोला ऊ सफल भयो त । तर होईन गहिरिएर विचार गर्नुहोस त के ऊ साच्चै सफल भयो त ? अँह ऊ केहि धनसम्पति जम्मा पार्न सफल भयो होला तर ऊ वास्तबिक जीवनामा झन असफल भएको हुन्छ । किनकि उसले रातारात धनि हुन गरेका विभिन्न हर्कतले उसलाई चैनको सास फेर्न दिएको हुदैन, उसको मन भतभति पोलेको हुन्छ, ऊ रातमा निद न दिनमा भोक प्यास भएको हुन्छ । ऊ भौतिकरुपमा सम्पन्न भएर पनि मानसिकरुपमा साह्यै दरिद्र बन्न पुग्छ । ऊ भित्रीरुपमा निक्कै कमजोर भएको हुन्छ । के तपाई यसलाई सफलता प्राप्त गरेको भन्न सक्नुहुन्छ ? अहँ यो सफलता हुदै होइन । यो त केवल एउता भ्रम हो । हामी यस्तै भ्रमको पछि लागेको हुदा वास्तबिक सफल हुन सकिराखेका छैनौ । मान्छे अनैतिक र नकारात्मक कुराको पछि लागेर जीवनको एउता खुट्किलोमा त सफल होला , उसको एउटा चाहाना त पूरा होला तर अन्तत ऊ असफल नै हुन्छ । ‘ नहुदा एउटा पिर भए पछि दश वटा पिर ’ भनेझै मान्छलाई अनैतिक र नकारात्मक बाटोबाट पाएको सफलताले झन ठुलो असफलता भोगाउँछ ।
त्यसो भए जीवनमा वास्तबिक सफलता पाउन के गर्नु पर्छ त ? एउटा लडाई होइन सिङ्गो युद्ध जित्ने उपाय के छ त ? आउनुहोस मान्छेलाई साच्चै सफलता दिलाउने केहि आधार र सुत्रहरुको चर्चा गरौः-
महान लक्ष्यको निर्धारण
सकारात्मक दृष्टिकोणको निर्माण
माथिका यि ९ वटा कुरा सफलताका महत्वपुर्ण आधार तथा सुत्रहरुको स-विस्तार चर्चा गरौ कसरी दिलाउने रहेछ यि कुराहरुले सफलता –
महान लक्ष्यको निर्धारण -‍ भनिन्छ लक्ष्य नभएको मानिस बाँदर जस्तै हुन्छ । हुन पनि हो कहाँ पुग्ने ? के गर्ने भन्ने कुनै लक्ष्य नै छैन भने हिड्नुको के अर्थ हुन्छ र । फुटबल खेल्दा जति नै राम्रा खेलाडी भए पनि जति नै मेहनतले खेले पनि यहि गोलपोस्ट भएन भने के होला ? प्रष्ट छ – गोल हुदैन । गोल नभए पछि फुटबल खेल्नुको के अर्थ ? हो हाम्रो जीवनमा मा लक्ष्य पनि यस्तै कुरा हो । लक्ष्यले मानिसलाई के गर्ने ? कहाँ पुग्ने भनेर बाटो देखाउछ ।
अनि लक्ष्य भएर मात्र पनि हुदैन । महान लक्ष्य हुनुपर्छ । गलत र निकृष्ट लक्ष्यले मानिसलाई पतन गराउँछ । महान लक्ष्य भनेको आकासै छुनु, धरति उलटपुलट पार्नु मात्र होइन । महान लक्ष्यमा नैतिकता, इमानदारिता र त्याग हुनु पर्छ ।
अत महान लक्ष्य बनाउदा धन – सम्पति र शक्तिलाई होइन ज्ञान – गुण, नैतिकता, इमानदारिता र त्यागलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
दृढ संकल्प – हामीले आफ्नो महान लक्ष्यको निर्धारण गरिसके पछि त्यसलाई हर – हालतमा पूरा गरिछाड्ने दृढ संकल्प राख्नु पर्दछ । मान्छे महान लक्ष्य लिएर पनि विभिन्न कारणहरु लोभ – लालच, अधैर्य, अल्छिपन, कायरपन र द्धैध मनस्थितिका कारण आफ्नो लक्ष्यबाट हट्न सक्छ । त्यसैले आफ्नो महान लक्ष्यलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पूरा गरेरै छाड्छु भन्ने दृढ संकल्प चाहिन्छ । दृढ संकल्प बिनाको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।
सकारात्मक दृष्टिकोणको निर्माण – आनि छोइङ डोल्माको एउता गित छ – ‘फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काडै संसार ।’ यो गितले सफलतामा मानिसको दृष्टिकोणको के अर्थ र महत्व राख्छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दछ । वास्तबमा हामी संसारलाई जस्तो आँखाले हेर्छौ – त्यस्तै पाउछौ । हाम्रो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सहि छ भने हामी सहि नै देख्छौ र सहि र असल नै गर्छौ । यदि संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ भने हामी पनि अन्तत गलत नै हुन पग्छौ । यसर्थ सफलताको लागि हाम्रो दृष्टिकोण सहि हुन जरुरि छ । हार्वड विश्वबिध्यालयका विलियम जेम्स भन्छन “ मेरो पुस्ताको सबभन्दा ठुलो खोज भनेकै आफ्नो दृष्टिकोण परिबर्तन गरेर जीवनामा सकारात्मक परिबर्तन ल्याउन सक्छन भन्ने हो । ”
सु-स्पष्ट कार्ययोजना – सफलता प्राप्त गर्नको लागि उद्देश्य निर्धारण भए सगै त्यलाई कसरी – कसरी पूरा गर्ने भनेर सु-स्पष्ट कार्ययोजना पनि बनाउनु पर्छ । भनिन्छ – कुनै पनि कामको राम्रो सुदुवातले नै ५० प्रतिशत सफलता पाउने निश्चित हुन्छ । वास्तबमा हामीले राम्रो लक्ष्य बनाएर पनि सु-स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सकिएन भने हामीले सोचेको र चाहेको भन्दा धेरै फरक पनि हुनसक्छ । सु-स्पष्ट कार्ययोजना बिनाको लक्ष्य बीच – बीचमा तोडमोड हुने भएकाले त्यो स्वत हामीले चाहे ‍भन्दा फरक हुन्छ । त्यसैले हामीले कुनै पनि कुरामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि दुरदर्शी र सु-स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनु पर्छ ।
निरन्तर संर्घष – यहाँ एउटा व्यक्तिको चर्चा गरौँ – जसले २१ बर्षको उमेरमा व्यापारमा घाटा खाए । २२ बर्षको उमेरमा संसदिय चुनाब हारे । २४ बर्षको उमेरमा फरि व्यापारमा फर्के र फेरि घाटा खाए । २६ बर्षमा आफ्नो पत्नि गुमाए । २७ बर्षमा आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाए । ४५ बर्षको उमेरमा उपराष्ट्रपतिको चुनाबमा हारे । ४९ बर्षमा फेरि संसदिय चुनाबमा हारे र आखिरमा ५२ बर्षको उमेरमा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिमा बिजय भए । ऊनी को हुन ठम्याउनु भयो ? ऊनी हुन अब्राहम लिंकन । जो अहिले सम्म पनि प्रजातन्त्रको पर्याय बनेर संसारभर परिचित छन । हो यहि हो निरन्तर संघर्ष भनेको । जस्तो सुकै असफलताका बाबजुत पनि आफ्नो लक्ष्यबाट भाग्न हुदैन । सफलता हाम्रै हातमा छ । तपाई हामीले अहिले बालिरहेको बल्व बनाउन कति पटक प्रयास गरे होलान – थोमस एल्वा एडिसनले ? तपाई भन्नुहोला १० पटक तर गलत । फेरि भन्नुहोला ५० पटक, फेरि गलत । अब भने अलि कड्किएरै भन्नुहोला – के त्यसो भए १०० पटक त ? पुरै गलत । किनकि ऊनीले बल्व बनाउन ९९९९ पटक असफल भएर १०००० पटकमा बल्वको आविस्कार गरेका थिए । के तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ९९९९ ! हो यो हो निरन्तर संघर्ष ।
असल चरिच – चरित्र मानिसको सबैभन्दा ठुलो हतियार हो । तपाईसँग असल चरित्र छ भने तपाईलाई कसैले पनि हल्लाउन त के चलाउन पनि सक्दैन । तपाईको असल चरित्रले तपाईलाई सदा सहि बाटोतिर डोर्‌याई रहेको हुन्छ । असल चरित्रले लोभ – लालच र स्वार्थलाई ईन्कार गर्छ र मानिसलाई लक्ष्यमा केन्द्रित बनाउछ ।
कल्पनाशक्ति – संसारमा जे जति अपत्यारिला आबिस्कारहरु भएका छन् ती सबै कल्पनाशक्ति कै उपज हुन् । आज जतिपनि आबिस्कारहरु भएका छन्, यदि कुनै दिन ती कुरा संभब छ भनेर कसैले कल्पना गरेको हुदैन थियो भने निश्चित हो कि यि कुनै पनि कुराहरु आज हुने थिएनन् । हो त्यसैले कल्पनाशक्ति कै कारण ठुला – ठुला सफलता हासिल भएका छन् । त्यसैले आफ्ना हरेक लक्ष्य प्राप्तिमा कल्पनाशक्तिको भरपुर उपयोग गर्नु पर्दछ । सफलता हासिल गर्नुहोस ।
राम्रो सङ्गत – एक जना दार्शनिकले भनेका छन् – “ तपाईले नियमित सङ्गत गर्ने ३ जना साथिको बारेमा बताउनुहोस म तपाईको भविष्य सजिलै बताईदिनेछू । ” भन्नुको मतलब के हो भने आफुले नियमित सङ्गत गर्ने साथि जस्ता छन् आफु पनि त्यस्तै होइन्छ । नेपालीमा एउटा उखान पनि छ – ‘ संगत गुणाको फल ।’ हो वास्तबमा हामी जस्तो कुराको संगत गर्छौ हामी पनि त्यस्तै हुन्छौ । किनकि हामीलाई त्यहि कुराको तन – मनमा बानि परेको हुन्छ । त्यसैले सफलताको लागि हामीलाई राम्रो संगतको आवश्यकता पर्दछ ।
लेखन – धेरै अनुसन्धानबाट निस्किएको एउटा तथ्य के हो भने – अधिकांश सफल हुने मानिसले आफ्ना मनका कुरालाई लेख्ने गरेको पाईनु । वास्तबमा लेखनले कसरी मानिसलाई सफल बनाउन सहयोग गर्छ भनेर हेर्दा के पाइयो भने – जसले आफ्नो मनका कुराहरु लेखेर पढ्छ, उसले आफुले – आफुलाई चिन्न सकेको पाइयो । आफुलाई बुझ्न सकेको पाईयो र उसले म आफु कहाँ निर कसरी चुकेँ भनेर ठम्याउन पनि सकेको पाईयो । हो यहि कारणले गर्दा मानिसहरु आफ्नो जीवनमा सफल हुदारहेछन । यसर्थ आफ्ना मनका कुराहरु नियमित लेखेर पढ्नाले पनि सफलतामा ठुलो सहयोग गर्ने रहेछ ।
माथिका यि ९ वटा कुरा सफलताका महत्वपुर्ण आधार तथा सुत्रहरु हुन । यसका साथसाथै उचित खानपान, व्यायाम, साहस, आत्म सुझाब, आफ्नो लक्ष्यलाई सम्झाउने इन्डिकेटर र सरल जीवनशैली जस्ता कुरा हरुले पनि सफलता प्राप्त गर्नमा ठुलो सहयोग गर्छन ।
← तपाईले हेर्नु भयो यो फिल्म ? हरेक बाबुआमा र शिक्षकले हेर्नै पर्ने फिल्म